के हो पञ्चबलि ? हिन्दूधर्मका ज्ञाता भन्छन्– जीवहत्या पञ्चबलि होइन
Monday, 25 Sep, 2017 2:18 PM
असुरमाथि दैवी शक्तिको जीतमा विजयोत्सव मनाइँदै आएको विजया दशमी हिन्दू प्राचीन र ठूलो चाड हो । विजया दशमीलाई बडा दशैँ तथा नवरात्रि पनि भनिन्छ । विजया दशमीमा भक्तहरुले दुर्गा भवानीको नौ रुपको पूरा आरधना गर्छन् ।
पौराणिक कथाअनुसार दुर्गा भवानीको जन्म असुर नाशका लागि भएको थियो । यही कारण बडा दशैँमा जगदम्बे दुर्गा भवानीको विशेष रुपले पूजा आरधना हुने गर्छ । दशैँको समय देवी स्थानहरुमा भक्तहरुको बाक्लै भिड लाग्छ ।
दशैँको पहिलो दिन माता दुर्गा भवानीको प्रथम स्वरुप शैलेपुत्रीको पूजा आरधना गरिन्छ । दोस्रो दिन ब्रम्ह्चारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुशमाण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यमयनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नौ दिन सिद्धिधात्रीको पूजा आरधाना गरिन्छ । नवरात्रिको नवौँ दिन माता दुर्गा भवानी आफ्ना भक्तहरुको माझमा रहनका लागि पृथ्वीमा आएर बस्ने जनआस्था पनि रहँदै आएको छ । यसै कारणले दशैँका नौ दिन भक्तहरु माता दुर्गालाई खुसी बनाएर आर्शीवाद ग्रहण गर्न अनेकौ विधी विधानमा माता जगदम्बाको स्तुती गर्छन् ।
बडा दशैको सुरुवात घटस्थापनाबाट हुन्छ । यो दन घडा स्थापना गरी नौ थरीका अन्नहरुबाट जमरा राखिन्छ । दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ दिन बिहान र बेलुका शुद्ध भएर जमरामा नित्य पूजा, आरधना र धुप बत्ती गर्ने गरिन्छ । छैठौं दिन बेलुका बेलको हाँगाको स्तुती गरिन्छ र सोही बेलको हाँगो, उखुको बोट, केराको पात लगायतका अन्य फूलहरु सहित दशैको सातौं दिन भित्राइन्छ र दुर्गा माताको प्रमुख तीन स्वरुप महागौरी, महालक्ष्मी र महा सरस्वतीको आव्हान गरिन्छ ।
बडादशैँको आठौँ दिनलाई महाअष्टमी र नवौं दिनलाई महानवमी भनिन्छ । त्यसै बडा दशैको १० दिनलाई असुरमाथि दैवी शक्तिको विजयदिवसको रुपमा शुभसाइत निकालेर माता दुर्गा भवानीको आर्शीवाद स्वरुप टिका र जमरा ठूला र मान्यजनको हातबाट ग्रहण गरिन्छ । दशैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमामा जमरालाई नदीमा लागेर विसर्जन गर्ने प्रचलन छ ।
बडा दशैँमा महाअष्टमी र महानवमीको छुट्टै महत्व छ । साँचै नै दशैँ आएको अनुभूति यी दिनहरुले गराउँछन् । तर, यी दिनहरुमा हजारौं वर्षदेखि विद्यमान बली प्रथा छ । यसलाई धर्मको नाम दिइएको छ र निकै महत्वमा पनि राखिएको छ । घिरौंला र कुबिण्डोमात्रै होइन कुखुरा, बोका, राँगो, हाँसको बलि पनि दिइन्छ । पशुपंक्षि बलीलाई दशैँमा राज्यले नै मान्यता दिएको छ । राष्ट्रिय कोतघरहरुमा पनि वलि दिने गरिएको छ । वर्षौंदेखि काठमाडौंको बसन्तपुरमा रहेको दशैँ घरमा कालरात्रिको नाममा पञ्चबलि दिने प्रचलन पनि छ । त्यहाँ पञ्च बलिका रुपमा थुप्रै कुखुरा, बोका, राँगो, हाँस र कुबिन्डो बलि दिने गरिन्छ ।
के साँच्चै जगतजननी र जगदम्बा नामले पूजिने भगवती दुर्गाले रगतको बलि माग्लिन् त ? समस्त जगतकी आमा भनेर पूजित उनी आफ्नै सन्तानहरुको रगतको बलि पाउँदा खुसी होलिन् त ? बलि प्रथाले त हिन्दु धर्ममा नै प्रश्न चिन्ह खाडा गरिदिएको छ ।
हिन्दूधर्मका ज्ञाता प्राध्यापक भवानीप्रसाद खतिवडा हिन्दू धर्मशास्त्रमा कुनै पनि देवीदेवताले मलाई रगतको बलि देउ भनेको कुरा उल्लेख नगरिएको बताउँछन् । ‘वास्तवमा बलिको सन्देशमूलक भाव बेग्लै छ, जुन हामीले अझै पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौं । बलि दिनु भनेको त्याग गर्नु हो । मानिसहरु भित्र रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह र घृणाजस्ता अमानवीय गुण तथा कुप्रवृत्तिहरु त्याग गरेर आफ्नो पुरै ध्यानचित्त मातालाई समर्पण गर्नु नै जगतजननि माता दुर्गाले चाहेको र खोजेको पञ्च बलि हो,’ खतिवडाले धर्मको ब्याख्या गरे ।
मानिसहरुको मासुप्रतिको बढ्दो मोहका कारणले गर्दा पनि दशँैमा बली दिने प्रचलन सुरु भएको हो । ‘बलि प्रथा मानिसको स्वार्थका लागि निर्मित एक कुप्रथा हो । माता दुर्गाको नाममा मानिसहरुले आफ्नो घृणितस्वार्थ पूर्तिका लागि यसको सरुवात गरेका हुन् । नत्र कुन आमाले आफ्नै सन्तानको रगतको बलि मागेर त्यसलाई प्रसाद स्वरुप खान भन्लिन् र ?’ खतिवडाको प्रश्न छ ।